Tallaabooyinka suurta-galka ah inuu Farmaajo qaado | KEYDMEDIA ONLINE
Tallaabooyinka suurta-galka ah inuu Farmaajo qaado
Siyaasiyiinta mucaaradka waxay leeyihiin wax walba waa laga filan karaa Farmaajo, maadaama ficiladii horey ugu kacay ay muujinayaan damiciisa gurran ee xukunka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa Muqdisho ka jira guux xoogan, oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed iyo tallaabooyinka laga filan karo inuu qaado Farmaajo, oo loolan dhanka awoodda dalka kala dhaxeeya Ra'iisul Wasaare Rooble.
Bishii hore ayuu Farmaajo sheegay inuu shaqada ka joojiyay Rooble, wuxuuna isku dayay December 27 inuu dalka afgembiyo markii labaada sanadkii tagey gudihiisa, balse laga hortagay.
Waxay shalay markale Farmaajo iyo Rooble isku qabteen arin kale, oo ka baxsan doorashadda, taasoo ahayd fasixida lacag gaareysa $9.6 milyan oo dollar oo April 2018 laga qabtay Garoonka diyaaradaha Muqdisho, taasoo leedahay dowladda Imaaraadka.
Rooble ayaa amar ku bixiyay in la fasaxo lacagta, oo dib loogu celiyo dowladda Imaaraadka, laakiin waxaa kasoo horjeestay go'aankiisa Farmaajo oo isna siiyay Gudoomiyaha Bangiga Dhexe amar ah inuusan bixin karin lacagtaas, oo uu sheegay in sifo sharci-daro ah kusoo gashay dalka.
Welina meel uma dhicin kiiskan, iyadoo Gudoomiyaha Bangiga Dhexe aysan jirin tallaabo uu qaadey, mana la oga amarada Farmaajo iyo Rooble ee iska soo horjeeda midka uu qaadan doono. Imaaraadka ayaa hadda isku dayaya inuu dib usoo laabto, iyadoo uu ka faa'ideysanayo khilaafka siyaasadeed ee labada hogaamiye ee ugu sareysa dalka.
Siyaasiyiinta mucaaradka waxay leeyihiin wax walba waa laga filan karaa Farmaajo, maadaama ficiladii horey ugu kacay ay muujinayaan damiciisa gurran ee xukunka dalka oo isku dhejinayo, iyadoo uu Villa Soomaaliya jooga mudo sanad ah, oo dheeraad ku ah mudo-xileedkisia.
Waxyaabaha laga filan karo Farmaajo ee ku dhaqaaqi kara ayaa waxaa kamid ah inuu magacaabo Ra'iisul Wasaare, uu kasoo xushay mid kamid ah Beelaha ugu tunka weyn gobolka Banaadir, oo isaga difaac u noqon kara. Waxaa sidoo kale uu sameyn karaa inuu Mursal ku amaro inuu furo Gollaha Shacabka, si fuliyo qorshaha Rooble xilka looga qaadayo.
Waxaa sidoo kale Farmaajo ka shaqeynayaa inuu fashilmo shirka maalintii 6aad u socda Madaxda Maamulada iyo Rooble, oo laga dayrinayo natiijadiisa, kadib markii Villa Soomaaliya kusoo dhex-tuurtay kuwa fashilka wadahadalada ka shaqeynaya.